फेसबुकमा लभ परेको प्रेमी भे’ट्न गएकी कि’शोरीमा’थी सा’मुहिक ब-ला-त्का-र ! – Life Nepali
फेसबुकमा लभ परेको प्रेमी भे’ट्न गएकी कि’शोरीमा’थी सा’मुहिक ब-ला-त्का-र !
काठमाडौं, । फेसवुकवाट चि’नजान भएको युवालाई भे’ट्न गएकी एक किशोरी सुर्खेतमा सामुहिक ब’ला’त्का’रको सि’कार भएकी छन् । फेसबुकमा चिनजान भएपछि भे’ट्न बोलाएका कि’शोरले अर्का एक साथी सहित आफ्नै प्रेमिकाको सामुहिक ब’ला’त्का’र गरेका हुन् । फागुन २६ गते भेट्न बोलाएर जं’गलमा लगि साथीसंग मिलेर प्रेमिकाको ब’ला’त्का’र गरेका हुन् ।
दिउँसो २ बजे वीरेन्द्रनगर ९ स्थिति कांक्रेबिहार जं’गलमा घुम्न जाने बहानामा कि’शोरीलाई ल’गेर १६ र १७ वर्षका किशोरले सामुहिक ब’ला’त्का’र गरेका हुन् । घुमाउन लैजाने बा’हानामा दुई कि’शोरले ब’ला’त्का’र गरेको भन्दै पी’डितका अभिभावकले जा’हेरी दिएका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा कक्षा ७ मा पढ्दै गरेकी १५ वर्षीया कि’शोरी सा’मूहिक ब’ला’त्का’रको सि’कार भएपछि पी’डित परिवारले जाहेरी दिएको सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। ब’ला’त्का’र आ’रोप लागेका दुईमध्ये एकजनालाई प्रहरीले प’क्राउ गरिसकेको छ। प’क्राउ परेका कि’शोर १६ वर्षका हुन्। उनको नाम गो’प्य राखिएको छ।
उनका साथी १७ वर्षीय सागर चौधरी भने फरार छन्। प’क्राउ परेका किशोरले प्रहरीसँगको वयानमा फेसबुकमार्फत् प्रेम सम्बन्धमा रहेको र घुम्न जाँदा सहमतिमै शा’रीरिक सम्पर्क राखेको बताएका छन्। प’क्राउ परेका किशोरले उनीहरुबीच २५ दिनदेखि फेसबुकमा कुराकानी हुँदै आएको बताएका छन्।
Previous खुसिको खबर : एकै दिनमा थप १ सय ७३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त ( विवरण सहित )
Next श्रीमानलाई जे’ल पठाएर ससुरासँ’ग म’स्त बुहारी !